Ingabe amabhayisikili e-peloton adinga ukugcinwa? - Uplatoon
Main > Uplatoon > Ukugcinwa kwebhayisikili iPeloton - ungabhekana kanjani nakho
Ingabe amabhayisikili e-peloton adinga ukugcinwa?
TOIbhayisikili lePelotonkuyabiza impela, uma ucabanga ngakho. $ 2245 akuyona nje imali oyitshala kwenye imishini engahleliwe. Ngakho-ke,isondloyale mishini yokusebenza eyigugu ibaluleke kakhulu. Uma kungagcinwa, izindleko zokudumala zizokuthwala.
UBenji Jones: Leli bhayisikili libiza u- $ 2,000 futhi lithatha umhlaba wamabhayisikili ngesiphepho. Ithengiswa yinkampani yePeloton, okuthiwa inamakhasimende amaningi kunaleyo nje iSoulCycle enkulu yokuphimisa. Kepha okukuhlukanisa kakhulu lula kwebhayisikili, ungathatha ikilasi lokujikeleza kusuka noma yikuphi futhi, ngokusho kwenkampani, uthole ukuzivocavoca ikhwalithi yesitudiyo.
Lokho kuzwakala kukuhle manje, kepha ingabe kuwufanele ngempela umuzwa? Ukuze ngithole, ngathola ibhayisikili le-peloton nge-spin, futhi amasonto amabili ngangithatha ikilasi le-peloton eliyimizuzu engama-45 nsuku zonke, futhi lahamba kanjani? Hhayi-ke, ake sithi ngeke ngiphinde ngilunge lokhu Izinto zokuqala kuqala: Ukuthola ukuthi kuhle kangakanani ukuzivocavoca engingakuthola, ngavakashela umqeqeshi wezemidlalo uSean Kuechenmeister ngaphambi kwekilasi lami lokuqala. USean: Sethemba ukuthi uzothola imfanelo yakho eyisisekelo ngokukhethekile yokuhamba ngebhayisikili. UBenji: USean usebenza kwiLebhu Yezesayensi Yezemidlalo eNew York eStaten Island, futhi kulapho ahlola khona ukusebenza ngokomzimba kwabadlali abangochwepheshe.
Futhi manje yimina, isivakashi sakho esijwayelekile sokufaneleka. Kulungile, kulungile. Siqale ngokuthatha amamethrikhi ayisisekelo afana nesisindo namafutha omzimba.
Okulandelayo kwaba ezinye izilinganiso ezingezona-eziyisisekelo; Ngizizwa sengathi ngiyakwenza, njengesihlalo se-ejector. Kungumshini wesitho se-isokinetic. Ilinganisa amandla ama-quads ami.
Sibe sesihlola amandla omlenze, uSean: Jump. IBenji: Ukuhamba, nento ebizwa nge-muscle drive. USean: Ngakho-ke kungashayela ukuthi uthola ugesi wamanje kangakanani ebuchosheni ngalezi zinzwa.
Imisipha ifana nenyama engenangqondo ngempela. Izinzwa zinquma ukuthi izicubu zihamba kahle kangakanani. - Kodwa isivivinyo esinzima kunazo zonke? Isilinganiso salokho okuthiwa yi-VO2 max.
USean: Isizathu sokuthi i-VO2 max ibaluleke kangako kuma-bikers yisilinganiso sokuthi umzimba wakho uwusebenzisa kahle kanjani umoya-mpilo owungenayo lapho uphefumula. Uma usebenzisa kangcono umoya-mpilo, uzothuthwa ngokwengeziwe emzimbeni wakho futhi lapho uzokwazi khona ukusebenza kahle uzokwazi ukunyakaza futhi wenze noma yikuphi ukuzivocavoca okwenzayo. IBenji: Ngenze ngaphansi kwesilinganiso ku-VO2 max ku-47th percentile, obekuyihlazo.
Kepha kukonke bengisesimweni esihle impela futhi ngesilinganiso ngemuva kwami, bekuyisikhathi sokushayela. Ngenhlanhla ngaphandle kwesifihla-mlilo segesi kulokhu. Ukuqala bekukuhle kakhulu ngoba angizange ngingene ebhayisikili ekuqaleni.
Angiwuzwanga nje umculo, njengama-oldies noma, njenge, rock, angizimisele ngokugibela ibhayisikili lami ngiye edwaleni, ngigcine ngiya ekilasini eliqoshiwe futhi bengicabanga ukuthi ngisika kahle ekilasini futhi ngibe sengibuka ngabona ukuthi ngangisendaweni yama-589th, ngiyacabanga. Okungincomayo ukuthi kwakukhona abantu ababalelwa ku-2 500 kulelo kilasi, okwangenza ngazizwa ngiphakathi nendawo, okulungile impela. Ama-quads ami asevele aqala ukuwuzwa.
Ngempela ngiyakuzwa ukusha. Ngenze kangcono kancane namhlanje, bheka lokho. Indawo engu-2,136th kwezingu-10 000 ngisho, hhayi kabi! Ngangikhathele cishe kwasekuqaleni, kepha izinsuku zahamba ngokushesha futhi kungekudala ngangiyisikhonzi.
Ngiyaziqhenya ukusho ukuthi ngikwenze izinsuku eziyisikhombisa zilandelana! Kepha angikayiboni inqubekela phambili engaka; esikhundleni salokho, empeleni ngibe sezinhlungwini. Ngiqala impela ukuzwa ubuhlungu ohlangothini lwami lwesokudla uyazi, uma ngikhuluma iqiniso zonke izibalo zami zibukeka zifana nanamuhla njengoba zazinjalo lapho ngihamba okokuqala. Ngishise amakhalori angaphezulu kuka-500 ekilasini ngalinye kungakhathalekile ukuthi ngizizwa ngikhathele kangakanani entanjeni, kepha bengingeke ngime, ikakhulukazi njengoba uSean abikezela imiphumela emihle kakhulu ongayilindela.
Sean: Ngicabanga ukuthi uma ulahlekelwa ngamanoni bese uzishisa ngomunye umsipha, mhlawumbe sizokubona usuka ku-143 uye cishe ku-141, 140, um, kepha ngilindele ukuthi amandla akho akhuphuke, futhi ngilindele ukuthi le nombolo isuka kokulungile iye kokuhle nge-VO2 max yakho. UBenji: Ngiyinyuse ekuhambeni kwami ​​kwesishiyagalombili. Esikhundleni sokushayela ekhaya, uye ePeloton studio eManhattan lapho izifundo ziqoshwa khona.
Nganginelukuluku lokufuna ukubona ukuthi ngabe ngiphambi kothisha yini naphambi kwalokho okubonakala kungenye yezindawo ezinamandla nezikhanga kakhulu eNew York City. Kwakuyisikhathi esihle. Usuku olwandulela uSuku Lwezithandani ngakho-ke bekukhona izingoma eziningi zokwahlukana ebezizinhle.
Kepha kwavela ukuthi wonke amabhayisikili alinganiswa ngendlela ehlukile, ngakho-ke ukuboniswa kwami ​​ebhayisikili lami estudiyo kwakwehluke kakhulu kunebhayisikili enginalo ekhaya. Cishe bekunomehluko wama-200 wamakhalori. Ngakho ngazama kakhulu estudiyo.
Isilinganiso senhliziyo yami esimaphakathi sasiphakeme ngo-10% kunasekhaya, kepha ngokusho kwesibonisi sebhayisikili lami le-studio, ukubala kwami ​​nokusebenza kwamakhalori kwakungaphansi kwami ​​konke. Ngakho-ke isexwayiso esifanele, ikhawunta yekhalori ingahluka uma ungagibeli ibhayisikili elifanayo njalo maphakathi nesonto lesibili ukusebenza kwami ​​ekugcineni kuqale ukuthuthuka. Ngizizwa ngimuhle kakhulu Ukulahlekelwa ngamafutha omzimba, ngizizwa sengathi imilenze yami cishe inamandla ngokuphindwe kayinkulungwane.
Ngiyethemba ukuthi kunjalo. Ngiphinde ngaphula ama-calories ayi-600 ohambweni olulodwa namuhla okusho ukuthi sengingcono endleleni yami yokuqina ebhayisekilini. Kuyini, Uhambo Lokuya Emandleni? Inothi eseceleni: uma kufanele ngigxeke uPeloton ngasekupheleni, akuyona leyo Khwalithi yokuqeqeshwa
Umqeqeshi: Uma okuthile kufika engqondweni ngendlela yamandla uBenji: Yilulimi abaqeqeshi abalusebenzisayo ukugqugquzela. Kungaba yinto yomuntu siqu, kepha kumane kuzwakala kunguqiniso. Lesi yisifundo sokuzijwayeza, alikho ikhambi.
Noma kunjalo. Ezinsukwini ezimbalwa kamuva kwafika umzuzu engangiwulindile. Isiphetho! Woo! Amakilasi angu-14! Yebo, kuzwakala kukuhle ukwenziwa, mhlawumbe ngoba ngifeze inhloso yami, ngokwengxenye ngoba ngijabule kakhulu ukuthi ngingazizwa ngikhathele kakhulu futhi ngingagibeli ibhayisikili lami nsuku zonke.
Hhayi ukuthi bekungafanele, kusobala ukuthi umatasa nsuku zonke. Ake sibheke, ukusebenzisa okungu-14, amahora ayi-10 1/2, amamayela ayi-194, ama-calories ayi-7 745, lokho kube ukusebenza okuhle engake ngakuthola. Ngiphinde ngaphula ama-calories ayi-600 ohambweni olulodwa namuhla okusho ukuthi sengingcono, futhi uyabona ukuthi ngiqale ngangiqine kahle ngabuye ngacwila kancane ngabe sengiqala ukusebenza futhi ngosuku olulandelayo, ngabuyela ekuhlolweni kwami ​​kokulandelela emuva ilabhorethri.
Sean: Isilinganiso sakho sokuqala besingu-143.5. Uneminyaka eyi-142 namhlanje kanye nalelo phuzu zero, kepha isisindo sakho esinciphile, leyo yimisipha yakho, amathambo akho, uyazi, izicubu ezixhunyiwe bekungu-125.2 okokuqala.
Okwesibili kungu-125.4 ngakho konke okulahlekile kungamafutha. Unemisipha yakho.
Eqinisweni, uthole amakhilogremu angu-0.2 wemisipha phakathi nakho konke lokho. Kuyathakazelisa ukuthi wonke umsipha omusha engiwutholile waphelela endaweni eyodwa kuphela: umlenze wami wesobunxele.
Uyabukhumbula ubuhlungu obabusekudolweni lami langakwesokudla engangikhuluma ngabo? kulungiswe ngokuthembela kakhulu ohlangothini lwami lwesobunxele lapho nginyathela, ngakha imisipha lapho. Ngehlile isisindo somzimba wonke emzimbeni wami. Sean: Ukhumule isifuba.
Wehlise isisindo engalweni yangakwesobunxele futhi wehla ngesisindo sakho sangakwesokudla. UBenji: Futhi kungenxa yokuthi ngenza uhlobo olulodwa kuphela lomsebenzi ngosuku, kepha ushintsho olukhulu kakhulu belusezingeni lami le-VO2. Umqeqeshi: Ngakho kwaba okokuqala kwakhe, futhi lena entsha yakhe, lapho manje efika kuma-79% kuphela.
I-Cinematographer: Akukholakali lokho! UDean: 47 kuye ku-79. UBenji: Ngakho-ke ngingcono kunabantu abaningi? Sean: Yebo. Umubi kakhulu kunabantu abaningi abangcono kakhulu kunabantu abaningi.
UBenji: Hawu. Kuyamangaza lokho! KULUNGILE, imisipha eminingi emlenzeni wami wesobunxele, incane yonke indawo, nokubekezela okuningi. Kuthiwani ngamandla? Sean: Ngempela ulahlekelwe amandla, wandise amandla akho ngokwamandla, ngokwamandla e-aerobic, kepha ngokwamandla we-anaerobic, uhlelo lomzimba wethu olusebenzisa ushukela omningi lisebenzisa lokho esisebenzisa i-glycogen ukwenza Ukukhiqiza amandla namandla, ulahlekelwe isisindo empeleni.
UBenji: Futhi maqondana nokuzama ukuqonda lezo zinombolo amasonto amabili, ingabe lolo ushintsho olukhulu impela? Sean: Yebo, kunjalo. Ngicabanga ukuthi odokotela abaningi bancoma ukuthi cishe iphawundi elilinganise iphawundi kanye nekota lamafutha ngenyanga isilinganiso esinempilo sokulahlekelwa amafutha, ngakho-ke usengaphambili, ngakho-ke ngicabanga ukuthi uma uqhubeka kanjena ungahle - uzolahlekelwa ngaphezulu fat uma ungakha imisipha ethe xaxa, kepha ngesikhathi esithile kungaba nephuzu lapho ukubuya kwehla khona, lapho kufanele sishintshe okuthile enkambisweni. UBenji: Roger, KULUNGILE.
USean: Lokho bekukulungele inselelo yamasonto amabili, kepha ngicabanga ukuthi ayimeme kakhulu ngokuhamba kwesikhathi. UBenji: Kulungile. Futhi lokho kuyinto enhle ngoba umcabango wokuhamba ngebhayisikili usuvele muhle kabi.
O, uma ngiphinda ngiya futhi ngidinga ukwehlisa isisindo bese ngigibela entabeni yemali, ngiyaqiniseka ukuthi amasonto amabili okuhamba ngamandla ngebhayisikili njengaleli azokwanela.
Ngabe ngidinga ukugcoba i-peloton yami ngamafutha?
Ngakho-ke ake siqale ngokubuka konke lokho wenaisidingoukwazi ngokunakekela ibhayisikili lakho. Okwaqala aUPeloton uyakwenzangingenalo iketanga. Ngakho-ke, uma ujwayele ukulungisa i-Outdoor, cycling noma ibhayisikili lomgwaqo ngeukugcoba amafuthaiketanga, awudingiyenzaukuthi ngeyakhoUPlatoon. TOUPlatoonisebenza ngokumelana namandla kazibuthe.25 2021.
Ngakho-ke uma ungena esitolo samabhayisikili, esinemikhiqizo ebanzi kangaka emashalofini, kungahle kudideke. Futhi esizobhekana nakho namuhla izithambisi, amafutha, nezintambo, nokuthi uzisebenzisa kuphi futhi nini ebhayisikilini lakho. ngoba empeleni zichazwe engxenyeni ngayinye futhi zonyaka, ngakho-ke ake sibheke. (umculo omnandi) Ngakho-ke okokuqala, yini amafutha? Hhayi-ke, ikakhulu isuselwe ku-oyela, okunengqondo ngoba iyinto yokugcoba phela, bese ufaka i-thickener, futhi kwenzani lokho? Yebo, kuzoba yinto enguketshezi efana nale, ngakho-ke noma ingaqinile ngokuphelele, kusobala ukuthi ayisiwona uketshezi, bese kuthi i-viscosity yamafutha, ubukhulu obukhulu, lokho kuya ngokuthi ungakanani owengeza.
Kunengqondo, akunjalo? Yebo, kunezinto eziningi ezakha amafutha, yize ekuboneni kuqala kubukeka njengamafutha, akunjalo? Futhi kunezinto ezintathu eziyinhloko okumele ukhulume ngazo. Okokuqala, ukumelana namanzi. Okwethu abagibeli bamabhayisikili, kubalulekile, akunjalo? Ngoba lapha e-UK sivame ukugibela amabhayisikili emvuleni.
Ngiyazi ukuthi abanye benu abavamile ukubona imvula. Kepha ekugcineni kosuku sonke siyawasha amabhayisikili ethu, noma okungenani ngithemba ukuthi sonke siyakwenza noma kunjalo, ngakho-ke igrisi idinga ukuba nezinga elithile lokumelana namanzi. Okwesibili empeleni iphuzu lokwehla.
Ngakho-ke leli yizinga lokushisa lapho amanoni engasenamafutha khona ekugcineni aconsayo, i.e. ephenduka uwoyela noma igrisi.
Futhi ekugcineni kunezithasiselo. Ngakho-ke lezi kuzoba yizinto ezizozama ukunciphisa noma ukumelana nokugqwala, futhi kwezinye izimo zize zizame ukunciphisa ukungqubuzana. Kepha empeleni sizowasebenzisela kuphi amafutha? ibhayisikili? Ngendlela engicabanga ngayo ukuthi yizinto ezingathathelwani kaningi.
Ngakho-ke izinto ezinjengezintambo zabakaki bakho abaphansi, uma unebakaki elisezansi elinezintambo, wonke amabhere akho, ikakhulukazi indebe nesigaxa. Ngiyakwazisa ukuthi ngamakamelo egobolondo akulula kangako ukungena lapho uwagcobise, kepha usengakwazi ukuwagcoba ngamafutha. Futhi nomhlangano we-brake lever, ngakho-ke empeleni lezi zikulufo ezihamba futhi zibambe izigaxa zamabhuleki kuma-handlebars.
Inani likasawoti othole ezandleni ezijulukile ngetayipi lesibambo, futhi licishe lagqwala lapho ngezikulufo. Ngakho-ke empeleni, ngokuwagcoba, uzenzela umusa ngokuhamba kwesikhathi. Manje sengizobakhuluma ngokuhamba kwesikhathi ngoba kunamafutha athile.
Hlobo luni lwamafutha okufanele ulukhethe ngoba kunezinketho ezimbalwa ezahlukahlukene ezihlanganisa wonke amabhere akho nawo wonke umsebenzi odinga ukuwusebenzisela wona, ngakho-ke zonke izikrini nezimele, lolo hlobo lwento. Ngakho into efana naleyo. Muhle impela, awunonile kakhulu, futhi awuzacile kakhulu.
Uma iminyene kakhulu, ama-bearings ngeke ajike kahle ngokwanele, futhi uma incane kakhulu, ngeke ihlale isikhathi eside. Kodwa-ke, ebusika ngisebenzisa amafutha akhethekile. Ngakho-ke ngiya esikhumulweni semikhumbi ngiyothenga amafutha asolwandle.
Kungani ngenza lokhu? Yebo, ebusika, amabhayisikili ajwayele ukuhlukunyezwa kakhulu yizimo zokugibela futhi ikakhulukazi ngosawoti ovela emigwaqeni, ngakho-ke ukuze uwoyela wasolwandle uthande ukuhlala isikhashana, empeleni uhlala isikhathi eside, kepha kubalulekile ukunamathela kuwo khumbula ukusebenzisa amanye amagilavu ​​kanye nephinifa lesitolo lapho ngisebenzisa igrisi yalomkhumbi ngoba inamathele kakhulu futhi iyaxaka futhi ngonakalise amajezi, izikibha, ijini ngakho-ke qiniseka ukuthi awonakalisi noma yimuphi ukhaphethi noma izingubo. (IJoy music) Manje amafutha akhethekile, ake sibheke. Okokuqala anti-bamba noma ithusi unama.
Ekuqaleni zibukeka njengamafutha ajwayelekile kepha zehlukile futhi akuwona umbala nje kuphela. Ukuhlanganiswa kwala mafutha empeleni kuyizingcezu ze-nickel noma zethusi eziwunika lowo mbala. Futhi kungani ikwenza lokho? Yebo, kuhloselwe ukuvimbela lezo zinto ezimbili ezihlanganiswayo ukuthi zinganamathelani futhi zibe yiphupho elibi eliphelele elizodingeka lihlukaniswe izinyanga ezizayo.
Uma kwenzeka kuwe ngaphambilini, uzokwazi kahle ukuthi ngikhuluma ngani. Uzoyisebenzisa kuphi empeleni? Kuhle ukufaka isicelo ebusweni bezinsimbi ezimbili ezisebenzayo. Ngakho-ke cabanga ngamacala we-titanium ne-aluminium, izikulufo zebhodlela, mhlawumbe izikulufu zokunqanda uma unokuthile okufisayo, kubakaki abaphansi be-aluminium, imicu yokuhambisa, nalolo hlobo lwento.
Ngakho-ke lokho okwaziwa kakhulu ngokuthi i-fiber grip ngabagibeli bamabhayisikili akuwona amafutha anjalo, futhi akuhloselwe ukufeza injongo efanayo njengamafutha. Kodwa kuyini lokho? Yebo, unamathisela onamathela kancane ekuthinteni, futhi ngaphansi kwengxenye enkulu kukhona okusanhlamvu okuncane kwepulasitiki okugaya kahle kakhulu, futhi okukhona lapho ukudala ukungqubuzana, kepha ngani? Yebo, ikhabhoni empeleni iyashelela, futhi esikhathini esedlule abantu bebenomkhuba wokuqinisa kakhulu izikrini futhi ngenxa yalokho balimaze lezo zingxenye ezibizayo zekhabhoni zithathe lezo zimo zokubekezelela, zithuthukise ukubamba futhi, awudingi ukuqinisa izingxenye zakho kanye nengozi yokuzilimaza. Uzoyisebenzisa kuphi manje? Le, uma ufunda noma yiziphi izinkundla ze-inthanethi, uhlukaniswe kancane.
Kodwa ngikhulume nabanye ochwepheshe be-carbon fiber futhi ngenhlanhla bavumelana nami. Ezinye izindawo kungaba lapho ufaka okuthunyelwe kwesihlalo se-carbon fiber kuhlaka lwe-aluminium noma ifreyimu yekhabhoni, amashubhu wemfoloko ye-carbon fiber, iziqu, isiqu sesibambo, nasebusweni. Ama-Saddle rack nawo abaluleke kakhulu njengoba ejwayele ukuqhuma, njengabantu abaqinisa ngokweqile lezi zingqimba zekhabhoni.
Futhi ekugcineni akuvamile kakhulu, kepha i-THM Clavicula crankset, njengoba lokhu futhi isebenzisa isikulufa se-carbon fiber njenge-carbon fiber crank. Futhi ngokuqinisekile awufuni ukubadlulisa. (Joy music) Ngakho-ke eydijithali, yenza lokho ekushoyo kulebula, ikhiya imicu yakho, kepha kungani ufuna ukukwenza lokho? “Okokuqala, kunesizathu sokuphepha.
Ngakho-ke mhlawumbe cabanga ngama-stem bolts akho kanye nama-disc rotor bolts akho. Abanye abakhiqizi baze bacacise lokhu njengokuzenzakalelayo kwemboni, ngoba ekugcineni awufuni ukuthi lezi zinto zivele. Uma zikhululeka, uzokwazi ngakho, futhi ngeke kube kuhle kangako. (Umsindo we-Creaking) Futhi ngezikulufo ze-ratchet, lena indawo lapho ungafaka khona i-threadlocker ethile.
Ungaba nayo nakwezinye izikulufo ezinokuthambekela kokukhululeka. Kepha khumbula ukuthi uma lezi zikulufo ziphuma, empeleni cabanga ukuthi kungani, ngoba lokhu akuyona ikhambi eliyisimangaliso, ngeke kulithukulule, futhi liphenye ngempela leso sikulufa esivulekile. akuyona ukuhlanganisa i-threadlocker yakho ne-grease ngoba ngeke isebenze futhi nami angikaze ngiyisebenzise kwizikulufu ze-aluminium noma, ngoba amakhanda e-aluminium screw empeleni empeleni athambile, kuya ngohlobo lwe-aluminium esetshenzisiwe, futhi ingazungeza, uma kungenjalo ukuqina ngokuqinile.
Abanye abakhiqizi empeleni bawafaka njengokujwayelekile, futhi ngibonile amabhawodi ambalwa anjalo, futhi la mabhawodi wokuxhuma awakwazanga ukukhululeka ngaphandle kokuzungezisa amakhanda alawo mabhawodi, ngakho-ke ngokwami ​​bengingakugwema, kepha ekugcineni, nginamathele izincomo (umculo ojabulisayo) Amamiksi alondoloziwe. Manje sibona amabhayisikili amaningi anabakaki abaphansi abalingana kulezi zinsuku, yize abanye abantu bengawathandi. Isizathu esiyinhloko empeleni kungenxa ye-creak.
Kepha ngesigcini, ukubeka lokho phakathi kwegobolondo eliphansi, ngaphakathi kwalo, nezinkomishi zabakaki abaphansi, futhi kulanda ngempumelelo leyo mehluko omncane, omncane wokubekezelelana phakathi kwalezi zinto ezimbili, engiholela ekukholweni, yini ebangela leyo creak kwasekuqaleni. Ngakho-ke uma uyislayida bese ufaka ubakaki ongezansi, ayigcini nje ngokusiza ukugcina izinkomishi zikhona, kodwa futhi, ngethemba lakho, ukususa leyo creak ecasulayo, uyihambise. Ngakho-ke (umculo ojabulisayo) Izinto zokugcoba indawo eyodwa lapho empeleni kukhona ukudideka okuncane lapho abantu bengena esitolo sebhayisikili futhi babone udonga oluphelele lwabafana abahlukile.
Ekugcineni, uzowasebenzisela idrayivu yakho, yize kwesinye isikhathi ungawasebenzisa ezintanjeni ukufaka empeleni amaconsi ambalwa ukuthola ikhebuli engasasebenzi futhi, yize kuyisixazululo nje sesikhashana, ukwethembeka ngokuphelele , iziphethu zemithombo, into enjalo. Kodwa kungani? Ngabe siyayidinga ngempela? Yini inhloso? Yebo, ukusebenza kahle, okusho ukunciphisa ukungqubuzana kwesitimela, nokunciphisa ukugqoka bese ukunciphisa ukugqwala, okungukuthi zonke izinhlobo zokugqwala.
Kepha yiziphi izinhlobo ezikhona? Okokuqala, ukuthambisa okumanzi, okusobala ukuthi kwaklanyelwe isimo sezulu esimanzi, futhi kuklanyelwe ukuhlala ochungechungeni lwakho lokushayela futhi kushayele lapho isimo sezulu simanzi futhi ungagezi, okubalulekile ekushayeleni ngaphandle kokuncinza futhi ngeke kugqwale noma ngabe ushayela. Kukholwe noma ungakukholwa, kungenzeka uma ushayela isikhathi esanele. Okubi ukuthi, ukuthembeka ngokuphelele, kudonsela ukungcola okuningi, ukungcola nothuli, ngakho-ke udinga ukuyibuka njengoba i-drivetrain yakho iphela ngokushesha ukwedlula i-lubricant eyomile.
Uthola i-lubricant drive yezimo ezomile, kuzwakala kunengqondo? Yize empeleni kusenguketshezi olumanzi lapho luphuma. Kepha ngokuyisisekelo, uma isetshenziswe kahle, iyoma bese ishiya okokugqoka okufana nefilimu ngaphezulu kwama-pulleys wakho wamaketanga, futhi ngokuvamile akuhehi ukungcola okuningi noma uthuli, kodwa into eyodwa okufanele uyikhumbule ukuthi uma ithola kubanjwe imvula Kukhona futhi okokugcoba okukhethekile okufana ne-UFO Drip kusuka ku-CeramicSpeed, okusetshenziswa ngendlela efanayo naleyo yokuthambisa esivele ishiwo, futhi empeleni kulula kakhulu ukuyigeza. Izizwa yomile impela, futhi iza ngentengo, kepha bathi kuncane ukuguga nokugqabhuka kwe-driveline, nokungqubuzana futhi, ngakho-ke kufanele uhambe ngokushesha okungatheni, futhi kunendlela enhle yakudala Ukukhulisa uchungechunge ukuthi Ngigwetshwe i-articlet hhayi kudala kwesokudla ngakho-ke uwufaka kanjani empeleni umthambiso weketanga? Okokuqala ithiphu encane evela kimi, lokhu kungumbono wami nje, kepha ungahle uthande ukulalelisisa.
Angikaze ngisebenzise noma yini kusuka ekanini le-aerosol. Isizathu ukuthi uma ufafaza awuyilawuli ngokugcwele, ngakho-ke ingangcolisa ukuze ingene kahle emabhulekini akho e-disc, ikwenze kungasebenziseki ukugibela, uye onqenqemeni lomgwaqo, ungabi nesenzo esihle sokubopha amabhuleki, lapho uhlanganisa izinto zokuthambisa namabhuleki amabhuleki, akunjalo? Ngakho-ke ngenza okuthile ngombhobho onjengalona engikwazi empeleni ukuconsela ku-pulley yeketanga, kepha kufanele ngikwenze kanjani lokho? Okokuqala, qiniseka ukuthi une-drive etrain ehlanzekile ngempela, ngakho-ke akukho lutho kuyo, unayo nje eyigezile, enhle futhi ehlanzekile neyomile. Bese uthola iphinikhodi yokuxhuma noma isixhumanisi esihlukanisiwe seketanga bese usiletha cishe maphakathi nokugijima okuphansi kochungechunge, ngakho-ke lokhu kungaphansi kochungechunge.
Futhi-ke vele ubeke iconsi, okusho ukuthi, ukwehla okukodwa ku-roller ngayinye, kepha sebenzela emuva, bese kuthi lapho nje isiqalo sokuqala sibuya, yeka ukufaka igrisi. Lapho-ke mhlawumbe kathathu noma kane ujikela emuva kungabikho okugcobayo okuphuma embhobho, bese usula okweqile bese ulungele ukuhamba, kunjalo, ngiyethemba lokhu kukusizile, futhi ngifuna nokwazi ukuthi ugcobisa uthini , kumazwana angezansi. Futhi khumbula ukunikeza le ndatshana isithupha esikhulu bese wabelana ngayo nabangani bakho.
Futhi hlola nesitolo se-GCN, nangendatshana enhle yokuthi ungayikhulisa kanjani i-Chain yakho chofoza lapha ngezansi.
Ngingakwazi ukusebenzisa ama-Clorox wipes ku-peloton yami?
Indwangu ye-microfiber kanye nesifutho sokuhlanza esenzelwe yonke into njengoNkk. Meyer's Everyday Cleaner yikho konke okudingayo ukukuhlanzaiPeloton. Ukuhlanza ngaphambi kokuswakanyiswausula, njengeI-Clorox Isula, okuyiyenzaaqukethe i-bleach, noma inganeusula,canfuthi ubeesetshenzisiweUkucocaiifreyimu ye-iPeloton yakhoibhayisikili noma umshini wokunyathelisa.
Isikhathi sonyawo lomsubathi sokuvalelisa ake sixoxe ngokwelashwa nokuvinjelwa ngakho-ke akudingeki ukuthi ube ngumsubathi oqeqeshiwe ukuze uhlupheke ngonyawo lomsubathi, empeleni, yisifo sofuba esijwayelekile esithinta intsha eningi nabantu abadala. Unyawo lomsubathi luvamise ukwenzeka esikhumbeni phakathi kwezinzwane, kepha lungavela kwezinye izindawo ezinyaweni, manje izimpawu amabala amhlophe alumayo phakathi kwezinzwani, isibazi esibomvu namachashazi ezinyawo ezinesikhumba futhi isikhumba sakho singaze siqhekeze futhi sopha Manje Bengifuna ukusetha ezinye izithombe zonyawo lomsubathi, kepha ngiyazi ukuthi kwabanye abantu baqala ukuhlekisa ngezinyawo zakho ngakho-ke ngishiye isixhumanisi encazelweni engezansi ngezithombe eziwusizo zezimpawu zonyawo lomsubathi Manje siza ekwelashweni, kulandelwe ngamathiphu wokuvimbela engiwathola elusizo kakhulu futhi ewusizo, Manje unyawo lomsubathi cishe aluzukuthola kangcono, kepha ungesabi, ngoba lunamafutha amaningi okuthenga ama-timycotic, izifutho noma izimpushana ekhemisi lakho Izithako ezisebenzayo zifaka i-terbinafine, i-miconazole ne- clotrimazole. Kubaluleke kakhulu ukuthi uhlale ufunda ipheshana elifakiwe futhi uhlale ukhuluma nosokhemisi wakho ngokuthi ungazisebenzisa kanjani lezi zidakamizwa ezivimbela ukubola.
Lezi zindlela zokwelapha ezihlanjululwa zingenza umehluko omkhulu ekutheni zisebenza kangakanani ngaphambi kokuzisebenzisa. ukuthi uyihlanze kahle futhi uyomise indawo ngaphambi kokuyisebenzisa ngokwemiyalelo kasokhemisi wakho. Manje yisikhathi seseluleko sami sokusebenzisa umuthi wokubulala intsholongwane, kungaba ukhilimu, isifutho, noma impuphu, futhi izinyawo zakho manje zizobukeka zizinhle.
Unyawo lomsubathi seluphele nya ngaleli phuzu musa ukuyeka ukusebenzisa i-antifungal treatment KULUNGILE, yisebenzise amanye amasonto amabili futhi lokhu kuzosiza ukuvimbela unyawo lomsubathi ukuthi lungabuyi futhi lokho bekuyipipi lami elihle ngiyethemba usunalo manje Futhi ngicela ujabulise abanye okhilimu antifungal aqukethe i-hydrocortisone, i-hydrocortisone iyi-steroid ewusizo lapho isikhumba sibomvu, sithukuthele futhi sivuvukile kodwa lokhu ngikushiyela i-phar macist yakho ukuze ikweluleke njengoba ingakutshela uma ingeyakho Izifo ziyasiza noma cha. Kunezimo ezithile lapho kufanele ubone udokotela wakho khona manjalo uma unonyawo lomsubathi, olufana: B. Isifo sikashukela, amasosha omzimba abuthakathaka nokunye okuningi, kepha ini? Engizokwenza ukushiya uhlu olugcwele encazelweni engezansi engingancoma ukuthi noma ngubani ayifunde ukuze izindlela zokwelapha ziphele.
Manje, ake sifunde ukuthi ungaluvimbela kanjani unyawo lomsubathi ukuthi lusabalalele kwabanye abantu. Into ebaluleke kakhulu ongayenza ukugcina izinyawo zakho zihlanzekile futhi zomile. Manje, ake siqhubekele kwamanye amathiphu asele ukuze kungabi bikho iphuzu lokwelapha unyawo lwakho ngonyawo lomsubathi uma uqhubeka ulithelela kabusha ngokulifaka emanzi, izicathulo zefungal ngakho-ke shintsha izicathulo zakho njalo ukuze izicathulo zakho zomsebenzi zibe Izikibha zakho ezimbalwa amateki anazo ezimbalwa futhi manje ziyaphenduka kuyihlazo ukuthi ngibhajwe entabeni okwamanje kungenjalo bengizokuqondisa ekujikelezeni izicathulo zami, kodwa engikwenzayo, ngiphendula izicathulo isonto lonke ngokusebenzisa angizigqoki zonke izinsuku izicathulo ezifanayo ngihamba amahora angama-24 kuye kwangama-48 ngaphambi kokuba ngibe nesicathulo futhi, ngakho-ke inesikhathi esanele sokomisa. 2 Uma kufanele ugqoke izicathulo ezifanayo ngosuku olulandelayo, ake sithi useholidini njengami manje, bese uzomisa izicathulo ngesomisi sezinwele, kodwa ukushiye kubanda, ungakhipha ne-insole futhi lokho kuzosiza Ngokumisa Ngokushesha Ithiphu 3 Qiniseka ukuthi izicathulo zakho aziminyene kakhulu, ngakho-ke bopha intambo Ungazifaki izinzwane zakho ziqine kakhulu noma izinzwane zakho zizonamathela ndawonye zizofudumala futhi zibe manzi futhi ukhunta luzokhula lapho, ngakho-ke tshala izicathulo ezibanzi uma lokho kusiza noma ungazibophi ziqine kakhulu izintambo zezicathulo zakho bese uvumela izinyawo zakho ziphefumule.
Ithiphu Inombolo 4 Flip Flops Qiniseka ukuthi ugqoka lezi noma kuphi lapho izinyawo zakho zingafaké zicathulo, ngakho-ke emashaweni nasemakamelweni okhiye wokuzivocavoca kubhavu oshisayo echibini lokubhukuda noma yikuphi lapho kuzokuvimbela ekutholeni ukutheleleka ngemvubelo futhi uthole ukutheleleka kwefungal noma, nginomuzwa wokuthi lokhu kuphenduka ngokushesha kube yisikhangiso sezicathulo, kodwa futhi kubalulekile ukuthi ungabelani ngezicathulo nakho. Ithiphu 5 Qiniseka ukuthi womisa izinyawo ngokucophelela, ikakhulukazi phakathi kwezinzwani zakho, futhi ugweme amasokisi okwenziwa njengoba lokhu kwenza izinyawo zakho zijuluke kakhulu. Esikhundleni salokho gqoka amasokisi kakotini, amasokisi kasilika, amasokisi woboya, konke lokhu okuzokusiza ukuthi ujuluke kancane.
Shintsha amasokisi akho nsuku zonke nge-Onestip entsha, ehlanzekile unyawo lwe-Athlete luyathathelana kakhulu, ngakho-ke ukuze lungasabalali sicela ulandele lezi zeluleko futhi ungabelani ngamasokisi, izingubo, izicathulo, amathawula, njll. Lokho kungukuphela kwendatshana nginethemba lokuthi le ndatshana iyanisiza nginibone ngeviki elizayo ey bafana ngiyabonga ngokubuka udaba lwaleli sonto wenze uchofoze inkinobho yokuthanda noma yokubhalisa manje ukuze uhlale unolwazi ngama-athikili amasha masonto onke lapho usebenza nobuhle, kuyasebenza I-boom boom boom yenziwe, ukulungele kungaba ibhere kuleli hlathi Flippity Flippity Flippity Flop FlippityFlip Flop Flop Flippity Flippity, sawubona, unenye ithiphu yesine (FOLDING SOUND) inombolo yesine
Ingabe abafundisi bangakubona ku-peloton?
Yebo, isikrini kuUPlatoonibhayisikili nokunyathela kunekhamera yevidiyo! Kusenkabeni ephezulu yesikrini. Noma kunjalo, ayisetshenziswangaabafundisiukuNgizokubona. Esikhundleni salokho, ikhamera yevidiyo iyakuvumelawenaukuxoxa ngevidiyo nabangani ngesikhathi sokugibela.
Kungani i-peloton yami ichofoza?
Into yokuqala ukuzama lapho okungahleliwengokuchofozaumsindo uqhamuka endaweni enyovwayo ukuqinisekisa ukuthi ama-cleats akho aqinile ezicathulweni zakho zebhayisikili. Khipha i-screwdriver futhi uqiniseke ukuthi ziqinile ngokuphelele. Indawo elandelayo okufanele ubhekwe kuyo yizinyawo zakho ikakhulukazi ingxenye lapho iziqeshana ze-cleat zingena khona.
Ingabe uthinta ukulungiswa kwe-peloton?
Ngokuvumelana neUPlatoon, amathiphu ngokuqonda kwakho. Ngakho cha,wenaakudingekiithiphueyakhoUPlatoonabafana bokulethwa kepha amathiphu ahlonishwa njalo.
Yini okufanele uyihlanze ngebhayisikili lakho lePeloton?
TOindwangu ye-microfiber kanyeukuinhloso yonke emneneukuhlanzafafaza njengoNkk Meyer's EverydayUkuhlanzakonkewenaisidingoukuhlanza iPeloton. Sebenza kusuka ku-iphezulu kwe-ibhayisikiliifreyimu phansi, usula ngobumnene isigaba ngasinye.
Ungayibuka iNetflix ku-peloton?
Kangango bathinathanda ukuzitikaukubukelaIHhovisi, ngeshwa, ayikho indlela yokuxhuma ifayela le-UPlatoonHamba ngebhayisikili kwezinye izinhlelo zokusebenza ezifana ne-INetflix.Siyakwenzangiyethemba ukuletha lesi sici kufayela le-UPlatoonHamba ngebhayisikili ngokuzayo.
Uyabona abagibeli bohlelo lokusebenza ku-peloton?
Uzokwenza kanjalohhayibhekaokwedluleabagibelikokuzivocavoca, nomabhekanoma yimaphi amamethrikhiwenaNgimanebhekaokhona njengamanje owenza i-Workout ngasikhathi sinye nowena. I-uhlelo lokusebenzaivumelawenakwabaphezulu-abahlanu laboabagibeli, kufana ne-uyenzangebhayisikili nangenyathela.
Ulilungisa kanjani ibhayisikili le-peloton elichofozayo?
Into yokuqala ukuzama lapho okungahleliwengokuchofozaumsindo uvela endaweni enyovwayo ukuqinisekisa ukuthi ukucaca kwakho kuqinile kuibhayisikiliizicathulo. Khipha i-screwdriver futhi uqiniseke ukuthi ziqinile ngokuphelele. Indawo elandelayo okufanele ubhekwe kuyo yizinyawo zakho ikakhulukazi ingxenye lapho iziqeshana ze-cleat zingena khona.05.10.2020
Iyiphi indlela engcono yokulungisa ibhayisikili lePeloton?
Indlela enhle kakhulu yokuhlanza amabhayisikili ePeloton ukusetshenziswa kwama-baby wipe. Ungumkhiqizo ophephe kakhulu ongenawo amakhemikhali anokhahlo webhayisikili lakho eliyintandokazi iPeloton. Siyethemba ukuthi amathiphu ethu wokunakekelwa kwamabhayisikili ePeloton azokusiza empilweni yangempela. Awucabangi ukuthi imisebenzi emincane yokulungisa nsuku zonke iyona ephumelela kakhulu ukugwema ukulungiswa okukhulu?
Yini okudingeka uyazi mayelana ne-peloton?
Imibhalo Ephezulu Ukulungisa Amasethingi Ebhayisikili Wakho Ungathola lokhu kufundisa kusikrini sakho sokuthinta iBhayisikili ochungechungeni lwamavidiyo abizwa ngePeloton 101. Th I-Tread Lock Tread Lock iyisici sokuphepha esivala i-Peloton Tread + ngokuzenzakalela ngemuva kokufaka iTre yakho
Kufanele uhlole kangaki ibhayisikili lakho lePeloton?
Ama-pedals yizingxenye ezisetshenziswa kakhulu zebhayisikili lePeloton. Lezi kufanele zihlolwe njalo ngenyanga ukuqinisekisa ukuthi lezi zihlanzekile, zihamba kahle, futhi azikho umonakalo. Futhi ngemuva nje kokuzivocavoca, qinisa ama-pedals ukuze uqiniseke ukuthi afakwa kahle ebhayisikili.